Ny teti-dratsy natao hamelezana an’i Daniela (Dan.6:6-9)
Vakio izay voalaza momba ny lalàn'ny mpanjaka ao amin'ny Dan. 6:6-9. lnona no atahoran'ny mpanjaka? Ahoana no nampiasan'ireo mpitarika be fialonana izany tahotry ny mpanjaka izany handresena lahatra azy hamoaka ilay lalàna?
Naniry ny hanova ilay lalàna ny mpanjaka raha vao vita izany. Toa misy fahadalana izany, sa tsy izany? Latsaka tao anatin'ny fandrika novelarin'ireo tandapa izy, satria marani-tsaina tokoa ireo ka nanararaotra ny toe-javatra ara-politika teo amin'ilay fanjakana vao naorina. Nozarazarain'i Dariosa ny fahefan'ny fitondram-panjakana ka nanendry solo-mpanjaka roapolo amby zato izy mba hampahomby kokoa ny fitantanan-draharahan'ny fanjakana. Mety hampidi-doza koa anefa izany drafitra izany. Ahoana moa raha toa ka manapa-kevitra ny hikomy amin'ny mpanjaka ireo mpanapaka ireo? Raha izany dia hizarazara ny fanjakana; natahotra ny hisian'izany i Dariosa. Nataon'ireo mpitarika be fialonana, araka izany, izay hamoahan'ny mpanjaka lalàna "hampahatanjaka" ny fanjakana, lalàna izay manambara fa tsy misy olona afaka manao fangatahana na amin'iza na iza afa-tsy amin'ny mpanjaka ihany, mandritra ny telopolo andro. Ny hamonoana an'i Daniela mihitsy anefa no tena tanjon'izany lalàna izany. Nambaran'ireo mpitarika tamin'ny mpanjaka fa manohana izany lalàna izany avokoa ny rehetra, kanefa lainga izany fa tsy fantatr'i Daniela akory aza ny amin'izany.
Nampitovy ny mpanjaka amin'Andriamanitra ilay didy. Mandritra ny telopolo andro dia tsy maintsy mivavaka aminy ny rehetra. Rehefa izany dia ny mpanjaka no mitondra ny vavaka amin'ireo andriamanitra. Misy zavatra manan-danja anankiray tsy takatry ny mpanjaka: namoaka izany didy izany izy ho fiarovana ny fanjakana amin'ny teti-dratsy, saingy teti-dratsy hamonoana an'i Daniela mihitsy kokoa aza izany.
Andeha hojerentsika ireo ampahany roa mandrafitra ilay didin'ny mpanjaka. Ny famaizana no ampahany voalohany. Hatsipy ao an-davaky ny liona izay rehetra mandika izany lalàn'ny mpanjaka izany. Nohidiana tanaty trano ny liona tamin'ny andron'ireo mpanjaka tatsinanana fahiny; avoaka ihany izy ireny amin'ny fotoana sasany mba hahafahany mihaza. Tsy vitsy, araka izany, ny liona noana hamiravira ny olona izay sahy mandika ny lalàn'ny mpanjaka. Ny faharoa dia ny tsy fahafahana manova izany didy izany. Voaresaka ao amin'ny Est. 1:19 sy Est. 8:8 ny amin'ny tsy fahafahana manova ny "lalan'ny Medianina sy ny Persianina". Tsy azo ovana ny didy rehefa natao, ary na ny mpanjaka aza tsy afaka manova izany. Nitantara ny amin'ny fotoana iray izay niovan'ny fanapahan-kevitr'i Dariosa III (aoka tsy hafangaro amin'i Dariosa voalaza ao amin'ny bokin'i Daniela ) i Diodore de Sicile. Tsy azon'ilay mpanjaka natao intsony anefa ny nanafoana ny fanamelohana ho faty na dia tsy meloka aza ilay lehilahy namoahany izany.